China High Hydroxyethyl cellulose for enamathela umkhakha Umkhiqizi kanye Umthengisi | Longou
4. Upende omuhle we-emulsion udinga i-rheology ekhethekile yokupenda ukuqinisekisa ukulingana okuhle nokuqeda imikhondo yebhulashi ebusweni befilimu eyomile yomdwebo. I-rheology ihlobene nosayizi nokusatshalaliswa kwama-granules we-emulsion, kepha usayizi nokusatshalaliswa kunomthelela ohlelweni lokuzinza nobuchwepheshe be-polymerization obamukelwe ku-polymerization.
5. I-polymerization ebangelwe ukusebenzisa i-HEC njengama-colloids avikelayo izokhiqiza ikhwalithi efanayo ye-emulsion, ngaphandle komehluko emaqoqweni ahlukene we-emulsion: okwamanje ubukhulu be-emulsion granule bungalawulwa ngaphakathi komkhawulo omncane futhi ama-granules azosebenza njengezinto ezibalulekile ze-emulsion polymerization.
6. I-emulsion polymerizations evame ukusebenzisa i-HEC njenge-colloid evikelayo
Vinyl acetate nezinye monomers copolymerizing ezifana acrylic tesin, butadiene resin para-butadiene resin ethylene njll
7. I-methyl acrylic resin namanye ama-monomers wokukopisha njenge-acrylate, butadiene njll. I-Styrene-acrylate copolymer, ikhophi ye-styrene-butadlene mer, i-vinyl chloride-acrylate copplymer, i-acrylonitrile- butadiene copolmer.
Hydroxyethyl cellulose for enamathela umkhakha-1
Thayipha I-HE30MC, i-HE50MC, i-HE100MC ...
Ubuningi besisindo 250-550 (kg / cm 3)
Usayizi wezinhlayiyana (odlula u-0.212mm)% ≥92
PH inani 5.0-9.0
I-viscosity (isixazululo esingu-2%) 300--10 00000S (mPa.s, NDJ-1)
1. I-HEC yi-thickener esetshenziswa kakhulu kupende weLatex.
2. Ngaphezu kokuqina ngopende weLatex, unomsebenzi wokuqhafaza ukusabalalisa, ukuzinzisa nokugcina amanzi Izakhiwo zawo zingumphumela obalulekile wokuqina, nokuqina kwesicathulo, ukwakha ifilimu nokuqina kokugcina.
3. I-HEC yi-nonionic cellulose ether engasetshenziswa ezinhlotsheni eziningi ze-PH. It has ukuhambisana okuhle nezinye izinto, ezifana sombala, izinsiza, fillers kanye nosawoti, ukusebenza okuhle futhi yokululama. Akulula ukuconsa ukuxegiselwa nokusakazeka.
➢ Ukusabalalisa okulula nokuqedwa emanzini apholile, asikho isigaxa
➢ Ukumelana kwe-spatter okuvelele
➢ Ukwamukelwa okuhle kombala nentuthuko
➢ Ukuzinza okuhle
➢ Kuhle ukuzinza kwe-bio. akukho ukulahleka kwe-viscosity
Langaphambilini I-HEC emulsifying enhle kakhulu yamakhemikhali ansuku zonke
Olandelayo: I-viscosity ephezulu i-HEC esetshenziselwa ukumba uphethiloli
Ifilimu Yangaphambilini Ku-Detergent Kanye Nezimonyo
HEC for enamathela umkhakha
Izengezo zesikhathi eside ezivuliwe
Amakhemikhali Okwakha Umswakama